Xog: Diyaarado Dagaal oo Duqeeyay Ciidamadda Dowladda, Maxaa Khasaare ah oo ka dhashay,? – Hornafrik Media Network
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee dhawaan la wareegay deegaano ka mid ah Wadada u dhaxeysa degmooyinka Afgoye iyo Balcad ee gobolada Shabeellooyinka ayaa maalmahaan waxa ay la kulmayeen weeraro kaga imaanayay dhanka Al-Shabaab.
Jimcihii shalay Gelinkii dambe ayaa waxaa weerar ku soo qaaday deegaanada Basra iyo Daniga oo ah fariisinka Ciidamada Dowladda Al-Shabaab, waxaana la sheegay in uu halkaasi ka bilaawday dagaal mudo saacado ah socday oo labada dhinac dhex maray.
HornAfrik ayaa ogaatay in dagaalkaas ay ka qeyb qaateen diyaarado dagaal, kuwaas oo la sheegayo in duqeyn dhanka cirka ah oo ay sameeyeey ay qaarkood la beegsadeen fariisinka Ciidanka dowladda Soomaaliya, halkaas oo Khasaare uu ka soo gaaray Ciidanka Dowladda Somalia.
Saraakiil Ciidan ayaa u sheegay HornAfrik in duqeynta dhanka Cirka ah ay waxyeelo ka soo gaartay Ciidanka dowladda iyo Gaadiidka qaarkood intii uu dagaalkaas socday, taasi oo keentay in Ciidanka dowladda ay Aagii dagaalka isaga soo baxaan. Waxaana markaa kadib goobihii lagu dagaalamay qabsaday Kooxda Alshabaab.
Diyaaradaha Duqaynta gaystay ayaa waxaa lahaa Ciidamadda Maraykanka, Waxaana Saraakiisha Milatarigu ay aaminsan yihiin in duqaynta ay ku dhacday Qalad Farsamo, isla markaana ay Diyaaraduhu kala garan waayeen Ciidanka Dowladda iyo Kuwa Alshabaab oo watay isku dhar, isla markaana isku jiray Masaafo aan la kala saari karin oo isu muuqata.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Cabdullaahi Cali Caanood oo la hadlay Warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamdu ay qorsheynayaan in ay deegaanada labada Shabeelle kaga sugan yihiin Al-Shabaab kala wareegaan. Wuxuuna sheegay inay kaashanayaan Ciidamo Cadaan ah oo uusan sheegin Dalalka ay u dhasheen.
Kenya Oo Lacag Dul Dhigtay Horjoogayaal Ka Tirsan Al-Shabaab